Mgbakọ igwe ojii: Ngwa na ebe ikpo okwu mepere emepe ugbu a | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 24/09/2021 06:00 | Noticias, Netwọk / Sava
Site n'oge ruo n'oge, anyị na -enyochakarị omimi a Ngalaba IT O lekwasịrị anya site na nlele nke Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux. Oge ikpeazu bụ nso nso a Nzuzu nke artificial n'ime akwụkwọ akpọrọ: "Amamịghe Artificial: Onye kacha mara amara ma jiri ya mepere emepe AI". Taa, anyị ga -eme ihe yiri ya na mpaghara IT nke "Kọmputa igwe ojii", ya bụ, nke Comgwé ojii Comput.
Buru n'uche na "Kọmputa igwe ojii" ma ọ bụ Comgwé ojii Comput ihu ọma ọ bụ ijikwa akụ IT nke ọma site na ịntanetị. Ọ bụ kọmpụta dị ọcha nke etinyere dị ka ọrụ, wee nyefee ya n'okpuru atụmatụ chọrọ na ịkwụ ụgwọ maka oriri, site na Ikpokoro ọrụ igwe ojii.
Mgbakọ igwe ojii: ihe niile dịka ọrụ - XaaS
Maka ndị nwere mmasị ịgagharị ụfọdụ n'ime anyị gara aga metụtara posts na oke nke Mgbakọ igwe ojii, ị nwere ike pịa njikọ ndị a, ka ị gụchara akwụkwọ a:
"XaaS bụ ugbu a ihe atụ ọhụrụ maka ahịa kọmpụta igwe ojii na usoro uto ya maka afọ ole na ole sochirinụ ga -enwe mmetụta dị ukwuu na ngalaba nkwukọrịta, nnukwu data na ịntanetị nke ihe (IoT). Ebe ọ bụ na XaaS bụ echiche teknụzụ nke gụnyere ọtụtụ echiche metụtara ihe ọhụrụ teknụzụ na igwe ojii, nke na -ewepụta ụzọ ọhụrụ maka imepụta na itinye uru nye ndị otu, nke ọha na nkeonwe.". XaaS: Cloudgwé ojii Kọmputa - Ihe niile dịka Ọrụ
OpenStack na Igwe ojii Kọmputa: Ọdịnihu nke igwe ojii na-eji Software efu
1 Mgbakọ igwe ojii: Platforms na ngwa dị elu nke isi mmalite
1.1 Platforms Computing igwe ojii
1.1.2 Igwe ojii
1.2 Ngwa ngwa kọmpụta igwe ojii
Mgbakọ igwe ojii: Platforms na ngwa dị elu nke isi mmalite
Platforms Computing igwe ojii
N'etiti Nyiwe "Cloud Computing" o Comgwé ojii Computna nke oghe emeghe, anyị nwere ike ikwu ma kọwaa 4 ndị a:
Ọ bụ Sistemụ arụmọrụ n'ime igwe ojii na -ejikwa nnukwu kọmpụta, nchekwa na akụrụngwa netwọkụ na etiti data, ha niile na -ejikwa ma na -enye ha site na API nwere usoro nyocha nkịtị. Ọ nwekwara ogwe njikwa nke na -enye ndị nchịkwa ohere ịchịkwa ma mee ka ọ dịrị ndị ọrụ ha mfe ịnye akụrụngwa site na ntanetị weebụ. Na mgbakwunye na arụmọrụ ọkọlọtọ nke akụrụngwa dị ka ọrụ, enwere ihe ndị ọzọ na -enye orchestration, njikwa mmejọ na njikwa ọrụ, n'etiti ọrụ ndị ọzọ, iji hụ na ngwa onye ọrụ dị. Kedu ihe bụ OpenStack?
Ọ bụ Platform mepere emepe dị ka Ọrụ (PaaS) nke na-enye ezigbo ọfụma na ụdị ọgbara ọhụrụ maka ịnye ngwa ngwa igwe ojii n'elu Kubernetes. Na mgbakwunye, ọ na -enye nhọrọ igwe ojii, ntọala ndị nrụpụta, yana ọrụ ngwa. Na -eme ka ọ dịrị gị ọsọsọ ma dịrị gị mfe iji wuo, nwalee, kenye ma tụọ ngwa. Kedu ihe bụ Cloud Foundry?
Ọ bụ ụlọ ọrụ akpa Kubernetes nwere arụmọrụ akpaaka na-ejedebe, na-enyere gị aka ijikwa ngwakọ ngwakọ, igwe okwu dị elu, na ịgbakọ ọnụ. Ngwọta a sitere na ụlọ ọrụ Red Hat kachasị maka ịkwalite nrụpụta onye nrụpụta yana ịkwalite ihe ọhụrụ. Na site na ịnye arụmọrụ akpaaka zuru oke, ahụmịhe na-agbanwe agbanwe na gburugburu gburugburu, yana ntinye ọrụ onwe onye maka ndị mmepe, ndị otu nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ ịkwaga echiche site na mmepe gaa na imepụta nke ọma. Kedu ihe bụ Red Hat OpenShift?
Ọ bụ ebe mepere emepe nwere igwe ojii na ikpo okwu maka ihu. Kedu n'ime ihe ndị ọzọ, na-enyere òtù dị iche iche aka ịgbalịsi ike na-agafere n'igwe ojii ọha na ihe owuwu ụlọ nke igwe ojii site n'ikwe ka ha rụọ ọrụ akụrụngwa ha dị n'akụkụ akụkụ ekesa na akụ ala. Ọzọkwa, ọ na -enyekwara ndị ọrụ aka ijikwa ngalaba akpaaka na ngalaba orchestration dị ka akụkụ nke pipeline CI / CD. Kedu ihe bụ Cloudify?
Ndị ọzọ 13 dị ma mara bụ:
Alibaba Igwe ojii
Isi mmalite OpenShift / OKD
Ngwa ngwa kọmpụta igwe ojii
N'etiti Aplicaciones metụtara ma ọ bụ dabara na Ngalaba IT na "Kọmputa igwe ojii" o Comgwé ojii Computna nke oghe emeghe, anyị nwere ike kwuo ihe ndị a 10:
Cheta na, n'ime gara aga metụtara posts e kwuru n'elu, ọ ga -ekwe omume ịbanye n'ime echiche na teknụzụ na-esonụ:
Ihe niile dị ka ọrụ: XaaS, ihe ọ bụla dị ka ọrụ, ma ọ bụ ihe niile dị ka ọrụ.
Software dị ka Ọrụ: SaaS, Software dị ka Ọrụ.
Platform dị ka Ọrụ: PaaS, Platform dị ka Ọrụ.
Akụrụngwa dịka Ọrụ: IaaS, Akụrụngwa dịka Ọrụ.
Uru, uru, ọghọm na ihe egwu: Site na igwe ojii.
Njikọta: Site n'igwe ojii.
Ụdị ígwé ojii: Ọha, Nkeonwe, Obodo na ngwakọ.
Ngwakọta mgbasa ozi ọdịnihu: Mgbakọ igwe ojii.
Amamịghe echiche: Ihe kacha mma mara ama eji emeghe emeghe AI
Na nkenke, oke nke "Kọmputa igwe ojii" bụ otu n'ime ọtụtụ usoro IT ugbu a na kwa ụbọchị ọ na -aga n'ihu n'ike nakwa na ọ na -ekwe nkwa na ọ ga -enwerịrị ọtụtụ mmezu dị mkpa maka ọha mmadụ, ọkachasị n'ihe gbasara ọrụ na ụzọ ndụ ndị mmadụ. Ndị Comgwé ojii Comput yana teknụzụ na mmepe zuru oke dịka 6G, na Amamịghe echiche (AI), nke Internetntanetị nke Ihe (IoT) na ọtụtụ ndị ọzọ, kwere nkwa a ọdịnihu IT maka ọha mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Mgbakọ igwe ojii: Ngwa na nyiwe isi mmalite ugbu a